Lasopy sinoa sy Teas fa Mahasoa Ny Vatana Mandritra ny fitondrana Vohoka - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Lasopy sinoa sy Teas fa Mahasoa Ny Vatana Mandritra ny fitondrana Vohoka
Fiomanana fomba: Hosasany rehetra sakafo tsara
Fa ndao hatrehina izany: tsy voatery ho mora foana ny maha-vehivavyNy tsy manam-paharoa filàna toetra mety ho voafaritra ho efatra lehibe ny dingana eo amin ny fiainantsika: tonga fotoana, ny fitondrana vohoka, ny fiterahana ary lactation. Raha toa ka ianao ao amin'ny vohoka sehatra, tsy manana vaovao tsara tarehy zaza miandrandra, fa ny ara-batana sy ny hormonina fiovana ianao rehefa mifandray amin'ny mety ho tena sarotra, na izany aza. Amin'ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny ny fahasalamana, fitsaboana nentim-paharazana Sinoa sy ny fomba afaka ny ho tena mahasoa amin'ny fampidinana ny loza ny aretina sy ny aina ny aretina nandritra ny fitondrana vohoka.
Raha ny fohy ezaka fanasitranana dia ilaina, ny manan-danja dia mikendry ny maharitra, ny fomba fiaina ara-pahasalamana.
Nahoana no tsy maka fotoana mba mandoa ny saina ny vatana ny famantarana, raha nahatsikaritra ny vokatry ny sasany ny sakafo sy ny fanafody eo amin'ny vatana.
Ny vatantsika dia tsy manam-paharoa rehetra, ary toy izany koa ny aretina mety ho hafa ny antony samy hafa ny olona. Na dia ny"tsara indrindra"postpartum sakafo drafitra mety tsy ho mety ho an'ny olona rehetra, ka dia mifantoka loatra ny fomba ataony ny vatanao mba isan-karazany ny fanafody sy ny sakafo drafitra. Ankehitriny, isika dia mifantoka amin'ny mahasoa nentim-paharazana Shinoa ny lasopy sy teas - mahafinaritra fomba voajanahary ho an'ny tenanareo mba hahazo ny zavatra mahavelona dia mila roa mialoha sy aorian'ny vohoka. Vakio eo ho an'ny soso-kevitra ny Shinoa ny fomba fanamboarana ary koa ny torohevitra momba ny fomba handoavana ny saina ny vatana ny filàna mila ny alalan ny fitondrana vohoka dingana. Manomboka ny handray naoty ny toe-javatra ny fadim-bolana avy amin'ny fadim-bolana ny halavany sy ny faharetany, ny loko, fa mihasimba (matevina na ny rano), ary ny boky (mavesatra na ny hazavana). Ankoatry ny, mandoa ny saina ho misy miaraka soritr'aretina toy ny fadim-kibo, ny ra clots, mivonto, indray fanaintainana, mivonto ny nono, sns. Ireto misy roa mahazatra hatrany ny anton-javatra izay dia mihatra amin'ny vehivavy ny vintana ny ho lasa bevohoka amin'izao fotoana izao: Na dia tsy afaka ny hiverina indray ny fotoana, dia afaka mifehy ny habetsahan'ny ny adin-tsaina isika no miaina. Zava-dehibe ny tsy miraharaha ny toe-javatra ny isam-bolana ny"vahiny"toy ny fadim tsingerina dia mifandray akaiky na tsia isika dia afaka hitoe-jaza. Afaka maneho sy mamoaka ny fihetseham-po amin'ny fomba ara-pahasalamana ihany koa manampy amin'ny fanatsarana ny kalitao ny fadim-bolana ary mety ny kibo. Fahazoan-dalana fisotroana dite nitsangana (manampy ny aty mba hanitsy qi sy mifehy ny fadimbolana) ka ny iray herinandro alohan'ny ny fe-potoana andrasana. Ity dite indrindra fa ny hanitra ho an'ireo eo ambany be dia be ny adin-tsaina.
Ny tena mandeha amin'ny alalan'ny betsaka ny fiovana nandritra ny tany am-boalohany ny fitondrana vohoka ny mampifanaraka ho any amin'ny tsy mitsaha-mitombo am-bohoka.
Mandritra ny telo volana voalohany, ny zaza ny habeny dia tsy hitombo be loatra, ka tsy misy ilaina ny avy hatrany dia manomboka mihinana kokoa. Mifanohitra amin'izany kosa, dia mety tsy hiaina tanteraka ara-dalàna ny fitondrana vohoka soritr'aretina toy ny maraina ny aretina, fanina, mihetsika ny aretina sy ny jeneraly maloiloy, noho izany dia soso-kevitra izay mihinana kely, matetika sakafo fa tsy. Raha toa ianao ka miaina mafy soritr'aretina ianao, dia mety hihevitra mitady toro-hevitra avy amin'ny dokotera na voasoratra ara-panjakana Shinoa medicine no manao azy. Pour, ml rano mangatsiaka tao amin'ny vilany nisy, ampio sakafo, sy mahandro ny hafanana ambony mandra-nahandro.
Mifamadika ny ambany hafanana, ary mahandro sakafo mandritra ny adiny iray, nanampy ny vato krystaly siramamy mba hanandrana.
Misotro dite indray mandeha isan-kerinandro. Avy amin'ny volana fahadimy onwards, ny foetus ho lasa milamina kokoa sy ny fitomboana accelerates. Toy ny zaza mitombo, ny tsinainy lasa miha-feno olona, mitarika ho amin'ny bloating, fiantraikany ny fihetsikin'ny tsinay, ary na dia ny fitohanana. Raha toa ianao ka miaina mafy sy maina seza, na hafa hafanana-mifandray amin'ny aretina toy ny bloodshot eyes, maina ny vavako, hanimba fery na pimples, dia tokony hiezaka ny tsy mihinana sakafo fa mafana eo amin'ny natiora, anisan'izany ny voanjo, ny curry sy ny sakafo masiaka. Koa, toy kokoa Qi sy ny Ra dia mifantoka amin'ny mahavelona ny foetus, zava-dehibe ny mihaino ny Shinoa Sarakaty sy ny Aty mba hanatsarana ny ra sy ny qi famokarana mba hamelona tsara kokoa ny hozatra (tsy dia azo inoana fa ho tojo tongony ny kibo).
Fiomanana fomba: Hosasany rehetra sakafo tsara.
Lapoely no fry nanadio trondro miaraka amin'ny menaka, sakamalaho sy ny lohataona tongolo eo amin'ny andaniny sy ny ankilany mandra-kely volamena, avy eo dia aidino, ml ny rano ho any amin'ny vilany. Ampio sakafo rehetra sy mahandro ny hafanana ambony mandra-nahandro. Mifamadika ny ambany ny hafanana, ary mahandro sakafo ho an'ny fanampiny. Ampiana sira mba hanandrana.
Mahandro atody amin'ny rano sy hanala ny akora
Fiomanana fomba: Hosasany ny sakafo rehetra sy hotetehina ampahanà aviavy.
Pour ml ny rano an-vilany ary ampio kesika ny voanjo, ny aviavy, ary ny vary. Mahandro ny hafanana ambony mandra-vay ny rano. Avy eo dia avadiho ny ambany ny hafanana, ary mahandro sakafo ho an'ny telo-polo minitra, na mandra-congee mahatratra ny tsara tsy miovaova. Farany, ampio mainty sesame vovoka. Fahiny Shinoa ny fahendrena dia milaza fa"mangatsiaka"ny sakafo dia nisafidy ho an'ny vehivavy tamin'ny volana bevohoka, fa zava-dehibe ny indray antitrantero fa ny fitsaboana nentim-paharazana Sinoa mino syndrome fahasamihafana sy ny fitsaboana isaky ny aretina sy ny mety fanafody sy ny fanafody. Ny vatantsika dia tsy manam-paharoa, ary koa manova ny nandritra ny vanim-potoana samy hafa ny fiainana. Vehivavy malemy kokoa lalàm-panorenana dia tokony tsy mihinana be loatra ny"mangatsiaka"ny sakafo nandritra ny manontolo ny fitondrana vohoka. Izany dia ahitana ny"mangatsiaka"ny sakafo izay matetika"soso-kevitra"ho an'ny vehivavy tamin'ny volana bevohoka, toy ny watermelon, ahitra jelly ary gilasy. Mankafy ireo sakafo indray mandeha isan-kerinandro dia azo ekena, arakaraka ny vatana lalàm-panorenana. Mba hiomanana ho amin'ny Asa, izany dia manampy ihany koa ny zava-pisotro iray kapoaka ny vary dite na fanahy-toetra lasopy isan'andro volana ity, sy handray anjara amin'ny fahalemem-cardio fanatanjahan-tena toy ny mandeha an-tongotra na ny dobo. Fiomanana fomba: Hosasany rehetra sakafo tsara. Pour, ml ny rano ho any amin'ny vilany, ampio sakafo, sy mahandro ny hafanana ambony mandra-nahandro.
Mifamadika ny ambany ny hafanana, ary mahandro sakafo ho an'ny fanampiny - minitra.
Ny dite dia vonona indray mandeha ny rano mivadika ny milky fotsy loko. Manimba ihany ny rano, ary tsy mitandrina ny alina.
Ity dite dia mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Vary dite dia mora ho an'ny Shinoa sarakaty andravana, ary mandray, dia toy izany no mahatonga ny lehibe mahasitrana ny vatana mba naka aina avy amin'ny aretina, indrindra fa ny aretim-pivalanana na fotsiny avy ny andro lava. Cinci Leung, olo-Malaza lohany no manao azy ao amin'ny EC-Pitsaboana, mandeha dingana iray lavidavitra kokoa ny mampitombo ny fahiny fanao amin'ny alalan'ny fanakambanana nentim-paharazana Atsinanana amin'ny fomba maoderina Tandrefana fomba fiasa. Ny tena tanjona amin'ny EC-Pitsaboana mba hamerina ny manasitrana ny marary mampiasa fomba izay tetezana ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa. Dia scour, hatsembohana, hisintona strollers miakatra sy midina havoana sy be herim-po ny filaharam-be eo amin'ny MTR, mba hitondra aminareo ny vaovao farany momba ny zavatra mafana izao tontolo izao ny ray aman-dreny ao Hong Kong.
Dia ny Filipina Fanelanelanana Milaza Manohitra an'i Shina 'Hafahafa"sy"tsy misy Dikany'. Opinio Juris